संसार भरी कति प्रजातिका विदेशी बिराला छन् ? « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
संसार भरी कति प्रजातिका विदेशी बिराला छन् ?
२२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:२४
वास्तवमा संसारभरि कति प्रजातिका बिरालाहरु अवस्थित छन् भनेर बहस भइरहेको छ । स्पष्ट रूपमा प्राय जस्तो बिरालोहरु लोप भइसकेका छन् । अध्ययन अनुसार विश्वमा ४१ देखि ७३ प्रजातिका बिरालाहरु छन् । तिनीहरू अतिनै राम्रा र हेर्दा हेरिराखौं झै हुने गर्छन् । तिनीहरू धेरै प्यारा हुन्छन् र केवल तिनीहरूको रेशमी फर कोट स्ट्रोक हेरेर अनन्त खुशी पाउन सक्छौँ । तल केहि विदेशि बिरालाहरको बारेमा जानकारि दिएको छ ।
पर्सियन : के तपाईं प्यारो प्रकृतिको बिरालोको बच्चालाई हेर्दै हुनुहुन्छ जुन प्रकृतिको सुन्दर फूल जस्तो देखिन्छ ? त्यसोभए पर्सियन बिरालो तपाईंको लागि हो । यिनिहरु आकर्षक लामो कपाल, प्रमुख गाला र ठूल्ठूला आखा भएका हुन्छन् ।
शटहेयर : यी बिराला अरु बिराला भन्दा फरक किसिमका हुन्छन् । यीनिहरु विभिन्न रङ्गमा उपलब्ध गर्न सकिन्छ । सबै भन्दा बढी लोकप्रिय ब्रिटिश ब्लू हो, यस्को रङ्ग डार्क ब्लू हुन्छ र कैरो फर हुन्छ ।
बिरमान : बिरमान बिरालाको उत्पत्ति अलि रहस्यमय छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, बिरमानलाई अक्सर “बर्माको पवित्र बिरालो“ पनि भनिन्छ । बिरमान बिरालाहरूमा बीस फरक रंगहरू हुन्छ । निलो आँखाहरू र चार आगोको सेतो पञ्जा हुन्छ ।
बर्मी : बर्मीको उत्पत्ति बर्मा, थाईल्यान्ड र मलेसियामा भएको हो । सुन्दर, नरम, चम्किला फरको लागि यीािहरु प्रसिद्ध छन् ।
नर्वे्जियन वन बिराला :
तिनीहरू उत्पत्ति नर्वेमा भएको हो । तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई वाइकिंगहरू बाहेक गैर(घरेलु पाल्तु जनावरहरू मानिन्थ्यो । नर्वे्जियन वन बिरालाहरू लामो शरीर र प्रशस्त पुच्छरको रूपमा चिनिन्छन् । उनीहरू पानीलाई मन पराउँछन् ।
केहि विश्वास गर्छन् कि सियामी बिरालोलाई पुरानो इजिप्टमा फेला पार्न सकिन्छ । सियामी बिरालाहरूको आँखा तिखो हुन्छ । यीनिहरु वफदार घरपालुवा जनावर हुन । साथै अन्य बिरालोहरु …
प्रकाशित मिति: २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:२४
कोरोना आतंकबीच मास्क र गाउन लगाएरै यौनसम्पर्क!
यस्तो पो पार्यो कोरोनाले । कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको बेला ‘पोर्न
१२ वर्ष अघि नै सिल्भिया ब्राउनी द्वारा कोरोना भाइरसबारे भविष्यवाणी
विश्वयापी महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबारे १२ वर्ष अघि नै सिल्भिया ब्राउनी द्वारा भविष्यवाणी गरीएको
साना साना केटाकेटी देखेपछि सबैमे मन पराउछन्। मायाले हामीले चुम्बन गर्ने गर्छौं। पहिले सामान्यतय बच्चाको
मास्क र गाउन लगाएरै यौनसम्पर्क : कोरोना महामारीमा पनि ‘पोर्न’ व्यापार’
लण्डन : कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहेको भएपनि ‘पोर्न साइट’हरुले भने कमाउने
दिनको २ पटक ३३ किलोको दरले दुध दिएर विश्व रेकर्डमा दर्ज भैंसी ८१ लाखमा बिक्री
३३.१३ किलोग्राम दुध दिएर विश्व रेकर्ड राखेको भारतको हरियाणाको मुर्राह जातको भैंसी सरस्वती ८१ लाख
इञ्जिनियर बताउनेसंग टिकाटालो, दिनभर कुरीरहिन् बेहुली, तर आएनन् दुलाह
कार्डमा नक्कली बाबु-आमाको नाम एउटा विवाहमा दुलाहा नआएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । काठमाडौँको बानेश्वरमा आयोजित